လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားရန်အိတ်ထဲတွင်ဘာကိုသယ်ဆောင်နိုင်ပါသလဲ။ | ခရီးသွားသတင်း
မော်နီကာဆန် | | လေကြောင်း, အကြံပေးချက်များ
ဘယ်သူထုပ်ရတာကြိုက်သလဲ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အပင်ပန်းဆုံး၊ တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုတည်းသောအပိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်ကိုသွားမလဲ၊ ထုပ်ပိုးကျွန်တော်တို့ကိုအရှည်ဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုခရီးဆောင်အိတ်ဖြင့်သယ်နိုင်သနည်း။ အဘယ်အရာကိုတားမြစ်ထားသနည်း။ စာရင်းသည်အတော်လေးကျယ်ပြန့်ပြီးပြproblemsနာများနှင့်ပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန် သင့်လက်ဆွဲသေတ္တာကိုပြင်ဆင်ရန်ကူညီပေးပါ.
1.4 လေယာဉ်ပေါ်မှာစားစရာတွေယူလာလို့ရမလား နှင့်အချိုရည်?
2 တားမြစ်ထားသော, သို့သော်သတ္တုရှာဖွေရေးစက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအရာဝတ္ထု
ငါတို့ရှိသမျှသည်ငါတို့အိတ်ထဲတွင်မပါ ၀ င်သောအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးများရှိကြသည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာလူအများစုတို့သည်အထူးသဖြင့်လေယာဉ်ပျံတက်သောအခါအလွန်လိုအပ်သောအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများရှိသည်။ ဒါကြောင့် ငါတို့ဘယ်သူတွေကိုအိမ်မှာထားခဲ့ရမလဲ။
ချွန်ထက်သောအရာဝတ္ထုများအားလုံးအားပိတ်ပင်တားမြစ်သည်ရေခဲတုံးများ၊ ဓါးများ (ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမှအပ)၊ ဘလိတ်ဓားများ၊ ဓားများကဲ့သို့သော။ သင်ကဓားသွားများကိုလည်းချရမယ်၊ မင်းဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်ဘူးဆိုတာမင်းတို့သိတယ်၊ ဒါပေမဲ့လေဆိပ်မှာသူတို့မသိဘူး၊ စိတ်မကောင်းတာထက်လုံခြုံတာကပိုကောင်းတယ်။ ထို့အပြင်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုခွင့်မပြုသည့်အခြားအရာများမှာလည်းဖြစ်သည် သေနတ်သို့မဟုတ်ပေါက်ကွဲပစ္စည်းများသေနတ်များ၊ လေခွင်းများ၊ ပလပ်စတစ်ပေါက်ကွဲမှုများ၊ လက်ပစ်ဗုံးများသို့မဟုတ်ဓာတ်ဆီသို့မဟုတ်အခြားအရာများ။ သူတို့ကအရမ်းအန္တရာယ်များတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုထိန်းချုပ်မထားဘူး။
အကယ်၍ သင်သည်အားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသို့မဟုတ်သင်သွားလိုသည့်နေရာတွင်အားကစားလေ့ကျင့်ရန်လိုပါကသင်နှင့်အတူအောက်ပါတို့ကိုယူဆောင်။ မရပါဟုသင့်အားပြောရန်အလွန်ဝမ်းနည်းပါသည်။ တံငါလှေ၊ လှံတံချောင်း၊ ဂေါက်သီးသို့မဟုတ်ဟော်ကီချောင်းများ၊။ သင်အဲဒီမှာသိတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ဆီကနေအမြဲငှားနိုင်တယ်၊
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကိရိယာများကိုလည်းခွင့်မပြုပါထိုကဲ့သို့သောပုဆိန်, ချွန်ထက်, စစ်ရေးလေ့ကျင့်, လွှ, လွှ, လွှ, ဒါမှမဟုတ်အပင်များကိုခုတ်လှဲရန်ဥယျာဉ်တွင်အသုံးပြုသောကဲ့သို့သော။ ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့။ သင်သူတို့ကိုလိုအပ်လျှင်ဥပမာအိမ်တစ်အိမ်တွင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရန်သူတို့သည်သင်အတွက်သင့်ကိုသူတို့စွန့်ခွာသွားမှာသေချာသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ အနုပညာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများကိုလည်းသင်ချထားရပါလိမ့်မည်အရောင်ချွတ်ဆေး, လေပေါ်မှာသုတ်ဆေးသို့မဟုတ်မျက်ရည်ယိုဓာတ်ငွေ့ဖြစ်စေ။
အစားအစာနှင့်သောက်ရေကောအသို့နည်း။ ¿လေယာဉ်ပေါ်မှာအစားအစာယူလာနိုင်ပါတယ်? သင်၏မိသားစုသို့သွားမည်လား၊ သို့မဟုတ်ထိုအရပ်မှတစ်ခုခုယူဆောင်လာသည်ဖြစ်စေ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့ပြလေကြောင်းအဖွဲ့ (ICAO) နှင့်ဥရောပမြို့ပြလေကြောင်းညီလာခံ (CEAC) မှချမှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်အညီသင်သိသင့်သည်။အရည် ၁၀၀ မီလီမီတာအထိသယ်ဆောင်နိုင်သည်, သူတို့က 20 စင်တီမီတာ x 20 စင်တီမီတာတစ်ပွင့်လင်းတံဆိပ်ခတ်ပလပ်စတစ်အိတ်အတွင်း၌ရှိကြ၏။ အစားအစာနှင့်စပ်လျဉ်း။ တားမြစ်ထားသူများမှာ - ဝက်အူချောင်းများ၊ ဂျယ်လီများ၊ ဒိန်ခဲများ၊ ဒိန်ချဉ်နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။
စကားမစပ်၊ ဥပမာအားဖြင့်သင် Mallorca (Balearic Islands, Spain) သို့သွားပြီး ensaimada တစ်ခုကိုယူလိုလျှင်၊ ငွေတောင်းခံရန်လိုအပ်သည်; မဟုတ်ရင်သင်ကုမ္ပဏီပေါ်မူတည်ပြီးယူရို ၃၀ လောက်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်၏လေကြောင်းလိုင်း၏မူဝါဒများကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် သင်လေယာဉ်ပေါ်မှာအစားအစာယူလို့ရနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုအစားအစာတွေကိုသူတို့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာသိဖို့ အချို့သောအခြေအနေများတွင်အပြောင်းအလဲများရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့်လေဆိပ်သို့အစားအစာနှင့်အတူမသွားမီသင်ပျံသန်းမည့်လေယာဉ်ပေါ်၌အစားအစာကိုသင်စားသုံးနိုင်ကြောင်းသေချာပါစေ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ပေါ်တူဂီသို့ခရီးစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်မိသားစုများနှင့်မိတ်ဆွေများကိုပေးဖို့အလွန်ကောင်းသောလှပသောသံဗူးအချို့ကို ၀ ယ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့ကခွင့်ပြုထားသောမီလီမီတာပမာဏထက် ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်အားမြေပြင်ပေါ်တွင်ထားခဲ့ရသည်။ သို့သော်အခြားအစားအစာအမျိုးအစားများကိုခွင့်ပြုထားသည်။ ခြွင်းချက်များရှိသော်လည်းသင်လေယာဉ်ပေါ်တွင်အစားအစာယူနိုင်သည်.
ငါတို့ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအပြင်သတ္တုရှာဖွေရေးစက်တွေကိုအစပျိုးနိုင်တဲ့အရာများစွာရှိတယ် ဖေါက်ဝင်, ပရိုတင်း, ရှေငှေကြောကျမကျြရတနာ, မိုဘိုင်း, ဖိနပ် နှင့် ခါးပတ်ပုံး။
Pierce: ဖြစ်နိုင်သမျှအခါတိုင်းကအကြံပြုသည် သင်တတ်နိုင်သမျှဖယ်ရှားပါ။ သို့သော်အများဆုံးဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အချက်မှာ detector ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်က Pierce နှင့် voila များ ၀ တ်ဆင်ထားသည်ဟုသင်ပြောရန်သာလိုသည်။
Prosthesis: အကြောင်းကြားရန်အရေးကြီးသည် စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမီ။
ရတနာ: ထိန်းချုပ်ရေးမှတဆင့်မသွားမီ ပုတီး၊ လည်ဆွဲနှင့်လက်ကောက်များကိုဖယ်ရှားရမည် detector ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းမပြုမီမိမိကိုယ်ကိုယူနိူင်သောအကွက်တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သူတို့ကိုထည့်ထားမည်။
လက်ကိုင်ဖုန်း - လက်ဝတ်ရတနာနဲ့တူညီတယ်၊ ကျနော်တို့ကခရီးဆောင်သေတ္တာထဲမှာထားမည် terminal ကိုမှ ဦး တည်မီ။
ဖိနပ် - အကယ်၍ သူတို့မှာသတ္တု၊ အဆင်တန်ဆာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကန့်လန့်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရှိခဲ့ရင်၊ သင်သည်ထိုသူတို့ကိုပယ်ရှားရပါလိမ့်မယ် စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမီ။
Belt Buckles - အမြဲတမ်း detector ကိုအသံထွက်သည် ပထမရွေးစရာကလွဲလို့တခြားရွေးစရာမရှိဘူး။
ဒီအချိန်တွေမှာဘယ်သူမှသူတို့ကိုမစွန့်ခွာချင်ဘူး ဓာတ်ပုံကင်မရာ, တက်ဘလက်, လက်တော့ပ် ဝေးသည်သူ၏ စမတ်ဖုန်းအမှန်တရားလား ကံကောင်းထောက်မစွာ, လေဆိပ်မှာငါတို့ခရီးဆောင်အိတ်နဲ့သယ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝဘာမှမပြောပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကလက်ဖြင့်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ခိုးယူရှောင်ရှားရန် အဲဒါကိုခရီးဆောင်သေတ္တာထဲထည့်လိုက်တာကပိုအကြံပြုလိုတယ်။ ဤနည်းဖြင့်သင်သည် ပို၍ အကာအကွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အိုး, အလှကုန်! သူတို့ကမလက်လွတ်နိုင်ပါ ကွမ်းခြံကုန်းမ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးတောင့်။ သင်လည်းယူလာနိုင်ပါတယ် ဆေးဖက်ဝင်ဂျယ်လ် သူတို့က 100ml န့်သတ်ချက်ထက်မပိုပါဘူး။ အိုး, မမေ့မလြော့ပါ ဆံပင်ညှပ်.
အကယ်၍ သင်၏ကလေးသည်ပုလင်းထဲမှနို့ကိုသောက်နေဆဲသို့မဟုတ်ဂျုံယာဂုကိုစားလျှင်၎င်းကိုသင်ကျွေးရန်လိုအပ်သောအစာပမာဏကိုယူဆောင်လာနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဆေးကိုသောက်လျှင်၎င်းတို့သည်သင့်အားမည်သည့်အရာကိုမျှပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်မူလကွန်တိန်နာတွင်ရှိပြီးဆေးညွှန်းကိုသယ်ဆောင်ထားရန်သာလိုသည်.
ထိုထက်ပို။ ဘာမျှမ။ သင့်ရဲ့ ID ကိုယူပါ (နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ်ခရီးစဉ်ပါလျှင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်), နှင့်ပျော်မွေ့!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » အကြံပေးချက်များ » ခရီးဆောင်အိတ်ထဲမှာဘာတွေသယ်နိုင်ပါသလဲ။
အင်ဒီလီယာ ကာစတီလို ဂွန်ဇာလက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ ငါမှာသံသယတွေရှိတယ်။ ငါ့ကိုပြန်ပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အာဂျင်တီးနားတွင်ကျွန်ုပ်၏ကလေးများအားလေ့လာသည်။ သူတို့သည်ချိုချဉ်၊ ပြောင်းဖူး tortillas၊ ငရုတ်သီး၊ ဒိန်ခဲ၊ ငရုတ်သီးများကိုမှာယူကြသည်။ ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါကတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားဖြေဆိုနိုင်သည့်အရာအချို့ရှိပါသည်။
enedelia castillo gonzalez အားပြန်ပြောပါ
Yaakov Avdo Serrano ဟုသူကပြောသည်
လူတစ် ဦး လျှင်လေအိတ်နှင့်ခရီးဆောင်အိတ်စုစုပေါင်းအလေးချိန်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
Iaakov Avdo Serrano အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်သည် Buenos Aires တွင်ရှိပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ozonation ပစ္စည်းကိရိယာများကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတစ်ခု၊ ၎င်းကို Normel အဖွဲ့ရှိဂိုဒေါင်သို့ယူဆောင်လာနိုင်သလားသို့မဟုတ်အခြားငွေပေးချေရမလား ???
ကျွန်ုပ်စီးပွားဖြစ် Aerosol သို့မဟုတ်လေမှုတ်ဆေးနမူနာများကိုကျွန်ုပ်၏ခရီးဆောင်သေတ္တာထဲမှာသယ်နိုင်ပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ၅၀ မီလီမီတာရေမွှေးသယ်ဆောင်နိုင်လျှင်၎င်းမည်မျှတင်ဆောင်နိုင်သည်ကိုအတည်ပြုလိုပါသည်။
ငါ့ဆွေမျိုးတွေကိုပေးရမယ်ဆိုတာနံ့သာပေါင်းဘယ်လောက်များများ ၀ တ်နိုင်သလဲ။
ဟိုင်းငါလိုချင်တယ်။ ငါ Iquique မှာနေတယ်။ အရက်ယမကာပုလင်းတွေကိုစန်တီယာဂိုကိုလေယာဉ်နဲ့ယူသွားလို့မင်းငါ့ကိုဖြေနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
စပိန်မှပြင်သစ်သို့သွားရပါမည်။ ပုံမှန်ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့်အအေးထုတ်ကုန်များတွင် isothermal အိတ်တစ်လုံးဖြင့်ကျွန်ုပ်စစ်ဆေးနိုင်ပါသလား ???
ကျွန်တော့်မှာကိုလံဘီယာမှာသူငယ်ချင်းတချို့ရှိတယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုငရုတ်သီးနဲ့ဒိန်ခဲကိုမှာလိုက်တယ်။ မြေအောက်ခန်းထဲမှာသွားတဲ့ခရီးဆောင်သေတ္တာထဲမှာငါယူလို့ရမလား။
cristina maria က c ။ ferreira ဟုသူကပြောသည်
ပေါ်တူဂီမှ Tenerife သို့ဝိုင်ပုလင်းမည်မျှပို့နိုင်မည်နည်း။ Ryanair တွင်ငွေရနိုင်သည်
cristina maria c ကိုစာပြန်ပါ။ ferreira
Alejandra Frola ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ရီယိုဒီဂျနေရိုကိုကျွန်တော်သွားမယ်၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းညီအစ်ကိုတွေကိုပေးဖို့ရေမွှေးတွေအများကြီးယူလာနေတယ်။ ငါဘယ်လောက်ယူနိုင်မလဲ၊ ဝိုင် ၂ ပုလင်းသောက်နိုင်ရင်လည်းငါသိချင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
alejandra Frola အားပြန်ကြားပါ
၁၀၀ မီလီမီတာထက်ပိုသောကြောင့် ၀ ိုင်ပုလင်းများကိုသယ်ဆောင်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ သငျသညျသူတို့တူညီသောငွေပမာဏထက်မကျော်လွန်လျှင်သာလက်အိတ်၌သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ဇန်နဝါရီလမှာMedellínကနေ Cartajena ကို avianca areolinea ကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီမှာကျွန်မမှာရှိနေတဲ့သူငယ်ချင်းတချို့၊ အဲဒီမှာအလွယ်တကူမရနိုင်တဲ့ငါးအချို့၊ သကြားလုံးတွေ၊ သစ်သီးတွေကိုလည်းယူလာပေးဖို့ကျွန်မကိုတာဝန်ပေးပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်မှာဒီကိုခွင့်ပြုမထားကိုငါသိချင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Tamara kaufmann ဟုသူကပြောသည်
Tamara Kaufmann အားစာပြန်ပါ
ဒီတော့လက်ဆွဲအိတ်ထဲမှာမိတ်ကပ်မရှိဘူးလား။ သူတို့အိတ်များဆုံးရှုံးသွားပုံကိုအမေ ...
ငါ pisco, ပေါင်မုန့်, ​​အီစတာမုန့်, ​​ကိတ်မုန့်သို့မဟုတ်တစ်ခါတစ်ရံဤအစားအစာများကိုသယ်ဆောင်နိုင်လျှင်ငါသယ်ဆောင်ဘယ်လောက်အလေးချိန်သိရန်ချင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါသေချာအောင်ချင်တယ်။
maria martinez အားပြန်ပြောပါ
ဖြစ်နိုင်လျှင်ဖြစ်နိုင်မလားသိလား။ ရေငန်ရောက်အောင်ပုစွန်၊ ရေဘဝဲ၊ အသားစသောပင်လယ်စာများယူဆောင်လာပါကခွင့်ပြုချက်ရလိုပါကပေးဆောင်ရပါမည်လား။ အမဲသားကိုနီကာရာဂွာသို့ ???? သင့်ရဲ့ပြန်ကြားချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါလက်ကိုအိတ်၌စက်ရုံတစ်ရုံသယ်ဆောင်နိုင်ခြင်းရှိမရှိသိလိုလျှင်သို့မဟုတ်၎င်းကိုစစ်ဆေးရန်လိုသည် (ကျွန်ုပ်တို့ထိုင်း - ဒူဘိုင်း - မက်ဒရစ်မှစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်အတူပျံသန်းသည်)
Ingrid မှတ်တိုင် ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို ။ နော်ဝေးကနေချီလီကိုသွားနေပါတယ် ထုပ်ပိုးထားသောဒိန်ခဲနှင့်မျိုးစေ့များကိုလည်းထုပ်ပိုးနိုင်သည် ဒီအချက်အလက်လိုအပ်ပါတယ်
Ingrid stop ကိုအကြောင်းပြန်ပါ
Bora Bora သည်ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားတွင်ထူးခြားဆန်းပြားသောပရဒိသုဖြစ်သည်